Accueil > Gazetin'ny nosy > Razanamahasoa Christine: Mpiandry nanala ny odin-dRavalo tao Ambohitsorohitra
Razanamahasoa Christine: Mpiandry nanala ny odin-dRavalo tao Ambohitsorohitra
Ny tantara tsy mba fanadino. Niala tao Ambohitsorohitra ny mpiambina ity lapa ity taorian’ny famonoana olona nataon’ny miaramilan’ingahy Ravalomanana Marc tamin’ny 8 febroary 2009. Niditra tao amin’ity lapa ity ny mpomba an’Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Alohan’ny nidirana tao, ny mpiandry no nialoha làlana tamin’ny fidirana tamin’izany. Tokony ho tamin’ny 10 ora maraina tamin’izay fotoana izay ka ny depiote Razanamahasoa Christine voafidy avy ao Ambatofinandrahana, izay mpiandry koa no isan’ny mpitarika ny mpiandry maro teto Antananarivo hiditra tao Ambohitsorohitra. Nalaza tamin’izany fotoana izany fa feno ody ratsy ity toerana ity. Nisy tokoa ny fihetsika maro nataon’ireo mpiandry ireo hatreny ambavahady ka hatrany anatin’ny lapa izay fomba fangalana izany hono.
Natao teo imason’ny mpanao gazety sy ny mpitolona tao amin’ny mpomba an’i Andry Nirina Rajoelina izany rehetra izany. Nakorontana ambony ambany ity lapa ity tamin’izany fotoana izany ary naseho imasom-bahoaka avokoa ny zavatra heverina fa asan’ny maizina araka ny voalazan’ireto mpiandry ireto. Tamin’izany fotoana izany tokoa no nahitana hazo fanompoan-tsampy toa avy any amin’ny Amerikanina fahiny izay nampiasan’ny “Indiens” na ny “Peau rouge”. Nahitana lohan’osy marobe koa tao anatin’ny lapa ity ka nisy hatramin’ny volamena mihitsy ny sary vongana tamin’izany. Ny ankamaroany dia vita tamin’ny tanimanga. Nisy koa ireo zavatra hafa mifono tao anaty lamba isan-karazany. Nodoran’ireo mpiandry tao Ambohitsorohitra izany rehetra izany.
Resabe teto amin’ny firenena iny raharaha iny, ary mbola mipetraka ao an-tsain’ny olona maro koa. Matetika dia ny mpiandry no nialoha lalana ny fihetsiketsehana nataon’ingahy Andry Rajoelina tamin’ireny fotoana ireny.
Ny tantara tsy mba fanadino, ka amin’ny fanambarana nataon’ingahy Irako Andriamahazosoa Immi izay pastera filohan’ny fangonana FJKM (Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara) tao Mahamasina ny alahady faha 21 janoary 2018 lasa teo tamin’ny mpino kristianina avy amin’ity fiangonana ity dia mampahatsiahy ny raharahan’ny 2009 sy ny ody tao Ambohitsorohitra tao amin’ny lapam-panjakana
izay nipetrahan’ingahy Ravalomanana Marc. Milaza ity filohan’ny FJKM ity fa olona matahotra an’Andriamanitra sy zanak’Andriamanitra no tokony ho fidiana amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity. Tsy efa manainga ny olona tsy hifidy ity filoha teo aloha ity ve izany ity pastera ity?